Brain Plugins - ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရန် Plugins များ Linux မှ
အောက်ပါ2ယခင်ရေးသားချက်များ အပေါ် Brain အက်ပလီကေးရှင်းသောအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သော ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေ သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာသုံးတဲ့သုံးစွဲသူတွေရဲ့ဒီတတိယနဲ့အဆုံးသတ်သွားမှာပါ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း အသုံးပြုခြင်းမှတစ်ဆင့်၎င်း၏အလားအလာကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ရန် အကောင်းဆုံးပလပ်ဂင်များ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အထဲတွင်ရရှိနိုင်။
မှတ်မိဖို့လိုတယ် Brain အက်ပလီကေးရှင်း Tien မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ2နှစ်လိုအပ်တဲ့ဗဟုသုတရှိသူတွေကိုခွင့်ပြုပေးတယ်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ပလပ်အင်များကိုဖန်တီးပါ နှင့်လျှောက်လွှာ၏အလားအလာတိုးမြှင့်ဆက်လက်ရပ်ရွာနှင့်အတူသူတို့ကိုမျှဝေပါ။
အပေါ်အပိုင်းအရသိရသည်ယနေ့ ပလပ်ဂင်များ de la Cerebro ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အထူးသီးသန့်အသုံးပြုရန်နှင့်အထွေထွေအသုံးပြုရန်အတွက်အောက်ပါ plugins များရှိသည်။
1.1 MacOS Operating System သို့အထူးသီးသန့်ထားရှိသည်
1.2 Windows Operating System သို့အထူးသီးသန့်ထားရှိသည်
1.3 Linux operating system အတွက်သီးသန့်
2 အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် Plugins
3 ဦး နှောက်ဖြည့်စွက်
MacOS Operating System သို့အထူးသီးသန့်ထားရှိသည်
ဦး နှောက် -osx-အဆက်အသွယ်ဖြေ - OS contact application နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစီမံခွင့်ပေးတယ်
ဦး နှောက် -osx- သတ်မှတ်ဖြေ - OS အဘိဓာန် application နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစီမံခွင့်ပေးတယ်
ဦး နှောက် -osx-ထုတ်ဖြေ - မြန်မြန်ဆန်ဆန် OS တပ်ဆင်ထားသော volumes များကိုစီမံခြင်း
ဦး နှောက် -osx-system ကိုဖြေ - OS system ရဲ့အင်္ဂါရပ်တချို့ကိုအလိုအလျောက်စီမံပေးတယ်
ဦး နှောက်ရှာဖွေမှုလိုင်းမှမည်သည့် Shell command ကိုမဆို OS ၏ terminal application (console) မှလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုအောင်မြင်ရန်အသုံးပြုသည်။
Windows Operating System သို့အထူးသီးသန့်ထားရှိသည်
ဦး နှောက် - အရာအားလုံး - plugin ကိုVoidtools မှအရာအားလုံးကို သုံး၍ အချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသည်။ အရာအားလုံးသည် Windows အတွက် desktop search utility ဖြစ်ပြီးဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုအမည်နှင့်အလျင်အမြန်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဦး နှောက် - ပြတင်းပေါက် - စနစ်ဖြေ - OS system ရဲ့အင်္ဂါရပ်တချို့ကိုအလိုအလျောက်စီမံပေးတယ်
ဦး နှောက် - ပြတင်းပေါက် - shell ကိုရှာဖွေမှုလိုင်းမှ Shell command ကိုလုပ်ဆောင်ရန် OS ၏ terminal application (console) ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်။
Linux operating system အတွက်သီးသန့်
ဦး နှောက် -Linux- စနစ်ဖြေ - OS system ရဲ့အင်္ဂါရပ်တချို့ကိုအလိုအလျောက်စီမံပေးတယ်
ဦး နှောက် - ပြတင်းပေါက် - မန်နေဂျာဖြေ - ဖွင့်ထားတဲ့လျှောက်လွှာ ၀ င်းဒိုးတွေကိုစာရင်းပြုစုပြီး၊ သူတို့ကိုကြိုတင်စီမံထားတယ်၊ ပိတ်လိုက်တယ်။
ဤရွေ့ကား၏အမည်များဖြစ်ကြသည် ယေဘုယျသို့မဟုတ်တစ်လောကလုံးအသုံးပြုမှုအတွက်တရားဝင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်မည်သည့်တပ်ဆင်ထားသည့်မည်သည့် OS တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဦး နှောက် -stackoverflow
ဦး နှောက် -gkg
ဦး နှောက် - လူ့ - ရှာဖွေရေး
ဦး နှောက် imdb
ဦး နှောက် - ပြင်ဆင်ချက် - လမ်းကြောင်း
ဦး နှောက် github
ဦး နှောက် clipboard
ဦး နှောက် devdocs
ဦး နှောက် - vagalume-plugin ကို
ဦး နှောက် hex
ဦး နှောက် - ဘဲ - သွား
ဦး နှောက် vaporwave
ဦး နှောက် npm
ဦး နှောက် mdn
ဦး နှောက် -base2x16
ဦး နှောက် -based64
ဦး နှောက် - စာသား - ကိစ္စတွင်
ဦး နှောက် - packagist
ဦး နှောက် - သတ်မှတ်
ဦး နှောက် - цыган
ဦး နှောက် qrcode
ဦး နှောက် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဦး နှောက် npms
ဦး နှောက် xkcd
ဦး နှောက် - blockchain
ဦး နှောက် filmaffinity
ဦး နှောက် -wolfram-alpha
ဦး နှောက် -ahoo-Dec
ဦး နှောက်တို - url
ဦး နှောက် - ဖိုင် - ရှာဖွေရေး
ဦး နှောက် - phpstorm
သငျသညျမွငျသကဲ့သို့, ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူအများအပြားနှင့်အားလုံးနီးပါးရှိပါတယ်။ သို့သော်၎င်းကိုမပေးသောအသုံးပြုသူများအတွက် Brain အက်ပလီကေးရှင်း သူတို့အကြောင်း GNU / Linux Distros ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဒါကိုမကြိုက်ကြဘူး ကွေးနီ y အဲလ်ဘတ်.
လက်ရှိအခြေအနေအရ၊ Brain အက်ပလီကေးရှင်း ကိုယ့်အကြောင်း GNU / Linux Distroထို့ကြောင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲ "Linux" အတွက်သီးသန့်ပလပ်ဂင် (၂) ခု မှလွဲ၍ အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ဦး နှောက် -Linux- စနစ် y ဦး နှောက် - ဝင်းဒိုးမန်နေဂျာ), အောက်ပါအသုံးပြုမှုများအတွက်ဖော်ပြခဲ့သော add-ons ၁၀ ခု၊ အချို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။
Googleဖြေ - ပုံမှန်အားဖြင့် configure လုပ်ထားတဲ့ browser ပေါ်က web ကိုရှာဖွေဖို့။
Nav ဖိုင်များဖြေ - OS လမ်းကြောင်းတွေကြည့်တဲ့အခါဖိုင်တွေရဲ့ previews ကိုပြသဖို့ဖြစ်တယ်
converter: ယူနစ်နှင့်ငွေကြေး (ငွေကြေး) တိုင်းတာခြင်းပြောင်းလဲမှုများနှင့်ရိုးရှင်းသောသင်္ချာစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်ရန်။
Web ဖွင့်ပါရိုက်နှိပ် URL ကိုကြည့်ရှုရန်။ ဝဘ်စူးစမ်းလေ့လာမှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏အိုင်ကွန် (favicon / logo) ကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်သို့မဟုတ်မရနိုင်သည်။
ဖိုင်ရှာရန်တည်နေရာဖြေ - ရှာဖွေရေးဘားကနေဖိုင်စနစ်ကိုလေ့လာဖို့။
အခံွDesktop မှ Shell Scripting command များကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော၊ graphical applications များသို့မဟုတ် terminal commands များစတင်သောသူတို့၏အကြွင်းမဲ့လမ်းကြောင်းများနှင့် command များကိုလုပ်ဆောင်ရန်။
IPဖြေ - ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုလိပ်စာတွေမှာ configure လုပ်ထားတဲ့ကွန်ရက်လိပ်စာတွေကိုကြည့်ရှုရန်ဘားမှကြည့်ရှုရန်။
အောင်မြင်ဖြေ - လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းသုံးတွေထဲကတခုခုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ် ၀ င်းဒိုးတခုဖော်ထုတ်ဖို့။
Cryptocurrency: Blockchain ဂေဟစနစ်၏လက်ရှိ cryptocurrencies အများအပြား၏တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှမြင်ယောင်ရန်။
တိုတိုပြောရရင်မင်းတို့မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းရှိတယ် များစွာသောအခြားအသုံးဝင်သော plugins ကို အဲဒါကိုသုံးလို့ရတယ် အလုပ်မလုပ်နိုင် တစ် ဦး အပေါ်ကျေနပ်ဖွယ် Desktop Environment သို့မဟုတ် GNU / Linux Distro ကသတ်မှတ်သည်။ သို့သော်၊Command Maker ပါ"သောနိုင်ပါတယ် တိကျတဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖန်တီးပါ, ကဲ့သို့ default အမိန့်အမိန့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တွေပေးသောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ကျနော်တို့ကဒီတတိယနှင့်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Cerebro»သေချာသည်မှာ၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရန်သေချာသည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် Cross- ပလက်ဖောင်း application ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်စေရန်အလွန်အသုံးဝင်သည် ထွက်နိုင်ရေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပြူတာစားပွဲခုံတွေမှာ၊ ထို့ကြောင့်များစွာသောဖြစ်လိမ့်မည် အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Brain Plugins - ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရန် Plugins များ
SpaceX- Linux ကို အသုံးပြု၍ အာကာသယာဉ်မှူးများကို အာကာသထဲသို့ ခေါ်ဆောင်ပါ။
PeerTube 2.2 သည်အသံဖိုင်များ၊ ဗွီဒီယိုတင်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်နှင့်အခြားအရာများကိုတင်သွင်းခြင်းအတွက်တိုးတက်မှုများပါရှိသည်